काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात खोल्ने बिषयमा यस्तो निर्णय हुने ! – Sandesh Press
June 27, 2021 277
काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात खोल्ने बिषयमा यस्तो निर्णय हुने ! को-भिड-१९ संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एकसाता थप्ने तयारी भएको छ ।
भाइरस संक्रमण दर नघटेको निष्कर्ष निकाल्दै उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनले निषेधाज्ञा लम्ब्याउने तयारी गरेका हुन् । निषेधाज्ञा अवधि थप एकसाता लम्बिने भएपनि कुन-कुन क्षेत्रलाई खुकुलो तुल्याउने र कुन-कुन क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने भन्ने बारे निर्णय नभैसकेको ललितपुरका सिडियोले बताए ।
Prevमुक्तिनाथ मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल हेर्नुहोस ।
Nextघटना लुकाउन बगाउनै नसकिने खोलामा लाश फालियो , श रीरमा कुनै पनि क’पडा थिएन भन्दै बुढा बुबाआमा (भिडियो सहित)